Yogurt Ma yist Infection - Iri Yogurt iji kpochapu oria yist gi Ọkọwa Okwu Ahụike
2 Yogurt Ma yist Infection - Iri Yogurt iji wepu oria yist.
3 Yogurt Ma yist Infection: Mgbe A Ga-eji Yogurt.
4 Ihe ị ga-elebara anya: Yogọt na Yist Infection.
Ọ bụ naanị mgbe ọ bụla kwere ka ahụ anyị pụọ na nguzozi yist yist etolite ruo ebe ọ na-aghọ ọrịa n'ezie. Nke a nwere ike butere anyị ọtụtụ nsogbu na-adịghị mma, ọ dịkwa nwute, ọ nwekwara ike bụrụ nke na-adịghị ala ala.
Ihe kpatara ọrịa na-eko achịcha na-adịghị ala ala juru ebe niile bụ n’ihi na ọtụtụ n’ime anyị na-elebara ha anya n’ụzọ na-adịghị mma. Ọ bụ ihe dịịrị anyị mfe ịbanye n'ụlọ ahịa ọgwụ ozugbo anyị matara na anyị nwere ọrịa yist ma zụta ọgwụ ọnụnọ. Ọ bụ ihe nwute, nke a anaghị agwọ nsogbu ahụ nke na-eweta bute yist mana ọ na-akụtu ihe iko ahụ bụ ọnụọgụ ndị dị anyị mma n'ahụ anyị.
Ihe ọ hapụrụ, agbanyeghị, bụ nsogbu dị na ya Ugboro ugboro yist na-efe efe. Naanị yist siri ike ka kwere ka ọ dịrị n’ihi ya oge ọ bụla ọ toro n’ime ọrịa ọzọ, ọ na-agbasi ike karịa ka ọ dị na mbụ. N’ikpeazụ, ọ ghọrọ ọrịa nke enweghị ike ịgwọ ọgwụ n’ego ịgwọ ọrịa.
Yogurt Ma yist Infection: Mgbe A Ga-eji Yogurt.
Ọ bụrụ na ị na-emeso ọrịa yist na nke mbụ ma ọ bụ ọbụlagodi na ị nwere oria yist na-adịghị ala ala, ọgwụgwọ anụ ahụ bụ naanị ụzọ kachasị mma iji kpochapụ ya ozugbo na kpamkpam. Ihe kpatara nke a bụ maka na ọgwụgwọ anụ ahụ ga-ebuso nsogbu nke ọrịa yist, ọ bụghị ihe mgbaàmà ahụ. Otu n’ime ụzọ kachasị mma ị ga - esi nwee ike ịgwọ ọrịa ọrịa yist na - eme ya bụ iji yogọt.
Ihe ị ga-elebara anya: Yogọt na Yist Infection.
Ofdị yogọt na ị na-eji na-agwọ gị yist ọrịa dị mkpa. Ekwekwala ka nri si n’ime ihe a na-ere n’azu ahia, o na - enwekwa ihe eji edozi aru na shuga nke n’ezie nyeju oria ahu yist nke ị na - arịa.
Họrọ ihe dị ndụ, yogọt anụ ma rie ya ụbọchị niile. Ọ bụrụ na ị na-arịa ugbu a site na ọrịa yist na-egbu nwa, tinye tampon na yogọt ma fanye ya. Ọ ga - enyere gị aka iweghachite ahụ ahụ na nguzozi nke ọ chọrọ ma kwalite uto nke ezigbo nje ndị ga - eme ka achịcha yist.
Ihe na Yistakpado yist ọrịa, yist ọrịa gwọọ, yist ọrịa ọgwụgwọ, bred na yist ọrịa, yogọt na mgbochi yist mgbochi, yogọt na yist na-efe efe ọgwụgwọ